Somali - Telefoonka +44 300 123 2040 | Action Fraud
Somali - Telefoonka +44 300 123 2040
· Telefoonka +44 (0)161 234 9230.
· Markaad soo wacdo waxa kuu jawaabi qof ku hadla luqadaada Waxaad u baahan doontaa inaad u sheegto luqadaad ku hadasho.
· Waxa kaibna lagu odhan sug si turjumaan laguugu yeedho Taas waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqadood, sidaas darteed fadan ha dhigin telefoonka. Hadi aananu haysan turjumaan markaa, waxa lagu weydiin doonaa inaad na siiiso telefonnkaaga iyadoo markaa qof ku soo waci doono marka turjumaan firaaqo noqdo.
· Marka uu turjumaanku kula hadlo waxa uu/ay ku weydiin doonaa/taa inaad ka jawaabto su'aalo dhowr ah si laguugu diyaariyo warbixintaada musuqmaasuqa. Hubi in dhamaan wixi waraaqo ah ee aad hayso ee ku sabsan musuqmaasuqa aad haysato si aad uga jawaabi karto dhamaan su'aalaha.
Isniinta -Jimcaha: 8 subaxdii ilaa 9 galinka danbe Sabtida: 9 subaxdiii ilaa 5 galinka danbe Axadii: 9 subaxdii to 5 galinka danbe Telefoonka: 0300 123 2040 telefoonka qoraalka: 0300 123 2050